မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: စင်္ကာပူမှာ အလုပ်အကိုင်များရှာမယ်ဆိုရင်
ကျမလဲ အလည်လာရင်း အလုပ်ရှာရင်း အားနေဆဲမို့ စင်္ကာပူမှာ လာပြီးအလုပ်လုပ်ချင်သူများအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေ ရှာစုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ * Agilent * AICG Online * AsiaEmployment * AsianSpider * BestJobs * BayT * CareerTips * CareerZone * CyberSpace * EFinancialCareer * EnterSingapore * ExpatForum * Expatriates * FutureGen * JobsCentral * JobsCity * JobsCyclone * JobsDB * JobsF1 * JobMarket * JobsQ * JobsearchWorld * Jobseek * JobsSupermart * Jobstreet * Jobs @ Intel * Jobs @ Nature * Jobs @ Streetdirectory * Micron * MOE Jobs * Monster SG * SG Ads Online * SG Expats * SG IT Jobs * SG JobsOnline * SGJobsSearch * SG Recruit သူ့မှာ job alert ပေးထားလိုက်ရင်တော့ အိုကေ ပွဲပြီးသွားပီ။ သူက တခြားက ခေါ်တာတွေပါအကုန် alert လုပ်ပေးတော့တာပဲလေ * ST701 သတင်းစာကြော်ငြာမှာပါတဲ့အလုပ်တွေပဲ * TP Jobs * Work SG * ZDNetAsia * 4ICJ * Adecco Websiteအဲဒါ အလုပ်ခေါ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေချည်းပဲမလို့ အဲဒီတွေမှာ သွားရှာရတယ်(ကိုလူအေး sidebar ထဲကမလာတာတွေ အဟိဟိ) ။ များသောအားဖြင့်တော့ register လုပ်ရတယ်။ ပြီးတော့ mail ကနေ Job alert ပို့ခိုင်းထားလဲရတယ်လေ။FindaJob in Singaporeအဲဒီမှာ သွားကြည့်လဲရတယ်နော်။Recommended လုပ်ချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကတော့http://jobscentral.com.sghttp://www.monster.com.sg/ နဲ့http://jobstreet.com.sg ပဲကျမကတော့ IT jobs နဲ့ဆိုင်တဲ့ web developer role ကိုလျှောက်ချင်တာမလို့ အဲဒီဆိုဒ်တွေကနေပဲ အလုပ်လျှောက်ဖြစ်တယ်။သတင်းစာမှာက အဲဒီလောက်ခေါ်တာမများဘူး။ သိပ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါနဲ့ စနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လောက်ပဲ သတင်းစာဝယ်ပြီး ရှာလျှောက်ဖြစ်တယ်။် (612က IT/Infocom ဆိုပြီး တန်းလှန်လိုက်တာပဲ)အလုပ်ရရင်တော့ကောင်းမယ်နော်။ ဒီမှာ ဆက်နေလို့ရမယ်။ လခထုတ်ပြီးတော့ Flyer ထဲက capsule ထဲမှာ ညစာသွားစားမယ်။အလုပ်မရသေးရင်တော့ တနည်းနည်းပေါ့နော် နည်းလမ်းရှာရမှာပေါ့ဘာလဲတော့ ပြောပြဘူး အဟိဟိ အဲဒါလျှို့ဝှက်ချက်(ဒါပေသိ တောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးကြေး :P )
all the best. come and getajob in England.Someone told me IT job market not bad here. My relative applied online. now shortlisted. interview in Manchester. At least ,avisit for her.
အလုပ်တွေ အကြောင်းကြီး ပျင်းစရာကြီး။ စင်ကာပူက ဟော့ရှော့ မဒီလေးတွေ အကြောင်းလည်း ရေးဦးလေ။ ဟီးဟီး :D
အဟမ်း အဟမ်း အန်တီမီမီရေ တစရအကုန်ဖွ သတင်းသမားတွေ ချင်ပူမှာ ရှိတယ်နော်.. ကျနော် အခမဲ့ သတင်းရေးပေးရမလား.. ဟိဟိ...